Laacibkii hore kooxda Liverpool Michael Owen oo si weyn u amaanay qaab ciyaareedka Salah – Gool FM
(Liverpool) 22 Agoosto 2018. Michael Owen ayaa wuxuu xaqiijiyay in joogi taanka xidigaha Mohamed Salah iyo Mohamed Elneny ee horyaalka Premier League, ay ka dhigan tahay in kubada cagta Masar ay siineyso in sumcad weyn ay ku dhex yeelato dalka England.
Laacibkii hore kooxda Liverpool ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in Mohamed Salah uusan ahayn ciyaaryahan ku kooban kaliya hal xili ciyaareed, balse uu maalinba maalinta ka dambeysa uu muujinayo inuu ka mid yahay xidigaha ugu wanaagsan aduunka xiligan la joogo.
Halyayga xulka qaranka England Owen ayaa wuxuu dhinaca kale ku dooday inaan wax shaki ah ku jirin awooda ciyaareed ee Mohamed Salah, isla markaana qof walba ay ku faraxsan tahay joogistiisa kooxda Liverpool.
Si kastaba marka laga yimaado hadalka laacibkii hore kooxda Liverpool ee Michael Owen, Mohamed Salaha ayaa u muuqda mid xili ciyaareedkan ku bilaawday si wanaagsan, kadib markii uu Reds ka caawiyay inay guul gaarto labadii kula ay kasoo ciyaartay horyaalka Premier League.
Barcelona oo ogolaatay in Ivan Rakitic uu u dhaqaaqo PSG